चेक बाउन्स मुद्धा हाल्दै हुनुहुन्छ ? होसियार ! आफैं फसिएला - नेपालबहस
काठमाडौं । चेक बाउन्सका अधिकांश उजुरीकर्ता मिटर ब्याजका कारोबारी रहेको खुलेको छ । अनुसन्धानमा अधिकांश उजुरीकर्ता मिटर ब्याजी रहेको देखिएपछि प्रहरीले बाउन्स चेकमा उल्लेखित रकमको समेत स्रोत खोजी गर्ने भएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार प्रत्येक दिन परिसर कार्यालयमा मात्रै चेक बाउन्सका ६५ भन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । मातहतका १४ वृत्तमा पनि दैनिक ६५ कै दरले उजुरी पर्छन् ।
परिसर र वृत्तका उजुरी विश्लेषण गर्दा प्रत्येक दिन सरदरमा दुई करोड रुपैयाँको चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको प्रहरी बताउँछ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत उजुरीकर्ता मात्रै वास्तविक पीडित रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत मिटरब्याजीदेखि विभिन्न पेसाका दलाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले चेक बाउन्सका उजुरीकर्ता मिटरब्याजीदेखि स्वार्थ केन्द्रित धन्दामा लागेकाहरू पाइएपछि अब चेकमा उल्लेखित रकमको स्रोत खोजिने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय लागू भएको मुलुकी संहिताले चेक बाउन्सलाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत राखेको छ ।
वास्तविक पीडितले न्याय पाउने उद्देश्यले कानुनको कल्पना गरिएको हो । तर, पछिल्ला दिन मिटरब्याजीदेखि स्वार्थ केन्द्रित धन्दामा लागेकाहरूले यसलाई हतियार बनाए । हामी कहाँ आउने अधिकांश उजुरी यस्तै समूहका छन् ।
त्यसैले प्रत्येक चेकमा उल्लेखित रकमको स्रोत खोज्दै छौँ ।’ प्रहरीका अनुसार गत साउनयता परिसरमा मात्रै चेक बाउन्समा दुई हजार ४ सय ४८ उजुरी परेका छन् । मातहत रहेका १४ वृत्तमा दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् ।
उजुरी भएका चेक ४० हजारदेखि तीन करोड ५० हजार रुपैयाँसम्मका छन् । परिसरमातहत बैंकिङ कसुर मुद्दा अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी विष्णु सेटीले उजुरीमा उल्लेखित रकमको परिणाम ठूलो रहेको बताए ।
उनले भने, ‘चेक बाउन्सका मुद्दा बढेका छन् । प्रत्येक दिन ६० देखि ६५ बाउन्सका उजुरी आउँछन् । उजुरीमा उल्लेखित रकम सरदर एक करोड रुपैयाँको हुन्छ । परिसर र वृत्तमा परेका उजुरीको रकम जोड्दा निक्कै ठूलो परिणाम आउँछ । अब यसको स्रोत खोजिन्छ । स्रोत नखुलेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाअन्तर्गत कारबाही अघि बढाइनेछ ।’
परिसर प्रमुख एसएसपी सुवेदीले भने, ‘बाउविरुद्ध छोराले चेक बाउन्सको मुद्दा हालेको छ । भदैले भनेको व्यक्तिलाई चेक काटिदिने फूपू पनि हाम्रै हिरासतमा छिन् । चेक बाउन्सको जालो अपत्यारिलो छ । यसलाई सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्न सकिएन भने दुर्घटना निम्तिने पक्का छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
चेक बाउन्स मुद्धा
Previous articleचलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा रविन्द्र खड्का विजयी
Next articleवर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथको भोटो आज देखाइदै
भोलीदेखि झुलाघाट नाका तीन दिनका लागि खुल्ने